တေးဂီတ — Steemit
ငါ့အဘို့ Music ကိုငါရှူရှိုက်ရသောအောက်စီဂျင်နှင့်တူ၏။ ဒါဟာငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ကျန်းမာတတ်၏။ ဒါဟာတဦးတည်းဂီတမပါဘဲဘဝမှာစိတ်ကူးမရနိုင်သည်ကိုအမှန်တကယ်ဟုဆိုသည်။ ဂီတမပါဘဲဘဝနေနှင့်လသည်မပါဘဲတစ်ဦးကိုမွကွေီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျွန်မအသက်ငယ်ကြီးထွားမှီတိုင်အောင်ငါ၏အကလေးဘဝ မှစ. ငါမဆိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမလိုဘဲလူတစ်ဦးဒါတိတ်ဆိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အလေ့လာမှုမှာအလုပ်များဖြစ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ဖို့ကြိုက်တယ်။ အဘယ်သူမျှမနေသောကြောင့်သဘာဝငါ့ကိုစကားပြောခဲ့ပါသည်။
တစ်နေ့မှာတော့ငါဒီတော့တက်တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုသတိပြုမိနှင့်ငါ့ပြဿနာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သူကဂီတကျောင်းကိုဝန်ခံချက် ယူ. နေ့စဉ်တစ်နာရီတချို့ဂီတသင်ယူဖို့မှုတ်သွင်း။ ငါလအကြာနောက်မှဘဝမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုယူဆောင်နှင့်လုံးဝနီးပါးငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီ, သောသူ၏နောက်တော်သို့လိုက်နဲ့လုပ်ပါ။ ငါအစောပိုင်းကဂီတသင်ယူခဲ့တူသောကျန်ရစ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ဂီတငါ့ကိုငြိမ်းချမ်းသောစိတ်စိတ်ပိုင်းစိတ်ကျေနပ်မှု, စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပေး၏, ငါ့အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံအစည်အများကြီးနဲ့ငါ့စိတ်ကိုဖြည့်ခြင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူငယ်ချင်းတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အဂီတ၏ငါ့ကိုဆီသို့ဆွဲဆောင်စတင်ခဲ့သည်။ ငါ့အဘသည်သင်အသက်တာ၌တက်ကျွေးမွေးရသည့်အခါတိုင်းအမြဲဒီဂီတ၏အကူအညီကို ယူ. , အကြောင်း, ဒါကြောင့်စင်စစ်သင်တို့အထဲက ယူ. အောင်မြင်မှုဆီသို့သင်ဦးဆောင်ပြောတယ်။ ထို့နောက်မှီတိုင်အောင်ငါဂီတနားထောင်ပြီးငါတယောက်တည်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်လာအခါတိုင်းငါဂီတဖျော်ဖြေမည်။
ကျနော်တို့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုရှောငျနိုငျ; ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု sparks ရာအလွန်အစွမ်းထက်နှင့်အလားအလာရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဝိညာဉျတျောကိုထိနဲ့ကွဝဠာထဲကနေပျောက်ကွယ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။
#good-karma #music #satisfied #life
Music give happy life
I like rock and alter
music can fresh entire minded and body
ေျခေလး လက္ေလး ေခါင္းေလးေတြလွဳပ္လို႔